Seyiphinde yakhalela ku-Eymael iChippa - Impempe
Seyiphinde yakhalela ku-Eymael iChippa
Seyigcine ibuyise umqeqeshi eyamqasha amahora ambalwa, yaphoqeleka ukumdedela ngenxa yokugxekwa iChippa United esanda kuxosha uDan Malesela.
Leli qembu laseMpumalanga Kapa seliqoke uLuc Eymael ukuphatha isikhundla sokuhola abaqeqeshi kanti uSiyabulela Gwambi – obeyiphini likaMalesela – uzothatha esokuba ngumqeqeshi okwesikhashana.
Ngokuthola kwe impempe.com, u-Eymael uzobamba lesi sikhundla ngesikhathi iqembu lisalinde impendulo yeSouth African Football Association (Safa) ngokuthi usevunyelwe yini ukuqeqesha kuleli ngokuphelele.
U-Eymael wanqatshelwa ukubuya azoqeqesha kuleli kulandela inkulumo elumelayo yokufanisa abalandeli beSimba SC yaseTanzania ayeyipheka ngaleso sikhathi nezinkawu.
Lokhu kwabonwa njengombono onenhlese yokucwasa ngebala iSafa yabe seyinquma ukuthi angaphinde avunyelwe ukuzoqeqesha kuleli. Nokho kwabuye kwavela ukuthi ikuhoxisile lokho, yaxolisa kuye kodwa ayizange ikuveze emphakathini lokho.
“Yingakho esazongabonakali ebhentshini kuze kube iSafa iyacacisa ngaye. Kodwa nguyena ozobe epheka iqembu uma lizilolonga,” kusho osondelene neqembu ongathandanga ukudalulwa.
Usihlalo weChilli Boys, uSivuyile Mpengesi usanda kukhononda ngendlela iqembu lakhe elashawodwa ngayo ngesikhathi limemezela ukuthi liqashe lo mqeqeshi waseBelgium. Funda lana: https://impempe.com/ibhola/uhlongoza-ukubopha-isafa-ngodaba-kula-eymael-umpengesi-wechippa/
Baze baphoqeleka ukuba bakuhoxise ukumqasha kwabo kwazise ngisho abaxhasi base besabisa ngokulimala iqembu.
“Kuyisifiso seqembu ukuthi sibophele uLuc Eymael ethimbeni labaqeqeshi. Lokhu kuzokwenzeka ngemuva kokuxoxisana nabaxhasi ngabalandeli bethu. Sisabhalele neSafa ukuthola ukucaciseleka ngokuthi singamqasha yini,” besifundeka kanje isitatimende seChilli Boys.
U-Eymael kuthiwa utheleke kuleli ngempelasonto ngenhloso yokuzojoyina iTshakhuma Tsha Madzivhandila kodwa yagcina ingasamlandanga esikhumulweni sezindiza futhi yamziba noma esefona efuna ikwazi izinhlelo.
Previous Previous post: Uncoma umvuzo wokuzikhandla owaMaZulu
Next Next post: Ukushaya iBucs neWydad sekubuyise umgqigqo kwiChiefs